[Xog Xaasaasi Ah]:-Qaar Ka Mid Ah Mas'uuliyiinta Xukuumadda Muuse Biixi Oo Madaxa Iskula Jira Iyo Khilaaf Hor Leh Oo Ka Dhex Aloosan
Saturday September 08, 2018 - 15:10:31 in Wararka by Abdi A.
Hargeysa-(Caalami-News)- Qaar ka mid ah Masuuliyiinta Xukuumadda Madaxweyne Muuse Biixi ayaa khilaaf wayn ka dhex aloosan yahay, waxaanu khilaafkani saamayn xoog leh ku yeeshay Dhinaca Geedi socodkii shaqada Hay'addahani iyo Shaqaalaha ka hawlga
Hargeysa-(Caalami-News)- Qaar ka mid ah Masuuliyiinta Xukuumadda Madaxweyne Muuse Biixi ayaa khilaaf wayn ka dhex aloosan yahay, waxaanu khilaafkani saamayn xoog leh ku yeeshay Dhinaca Geedi socodkii shaqada Hay'addahani iyo Shaqaalaha ka hawlgala oo si weyn uga war warsan Khilaafka Madaxdii ugu saraysay ka dhex aloosan.
ida warbixintan Wargeysa Foore soo gaadhay ay sheegayso,waxa uu khilaaf weyni ka dhex jiraa Wasiirka Wasaaradda Shaqo galinta Hinda Gaandi iyo Agaasimaha guud ee Wasaaraddaasi Maxamed Cilmi Aadan (Ilkacase) kaasi oo sida la sheegay gaadhay heer ay Gabadha Wasaaraddaasi haysataa shaqada ka joojiso Agaasimaha kadib sida warbixintani aanu helnay markii ay dacwad ka gudbisay dhinaca Madaxtooyadda islamarkaana awood loo siiyay inay talaabadaasi qaado. Dhinaca kale waxa uu Agaasime Ilkacase socod tamashleh Mudooyinkii ugu dambeeyay ugu maqnaa safar dibada ah, dhawaan ayaanu soo laabtay, waxaana loo badinayaa inuu khilaafkoodu salka ku hayo arimo dhinaca shaqada ah.
Sidoo kale Waxa uu Khilaaf horlehi mudooyinkii u dambeeyay ka dhex jiraa Gudoomiyaha Baanka dhexe ee Somaliland Cali Ibraahim Baqdaadi iyo Agaasimihiisa Guud Axmed Xasan Carwo kaasi oo dibada u soo baxay islamarkaana sida lanoo xaqiijiyay salka ku haya arimo Dhinaca maamulka ku saabsan. Warar kale ayaa sheegaya Khilaa xoogleh oo ka dhex aloosan Gudoomiyaha Gudida Qandaraasyada Qaranka Nuux Maxamed Xuseen Iyo Agaasimahiisa Guud kaasi oo gaadhay inaanu agaasimaha Guud shaqadaba kasoo xaadirin. Waxa intaasi dheer oo iyaguna Madaxa iskula jira Gudoomiyaha Hay’adda Qaxoontiga iyo Barokacayaasha Cabdikariin Xinif iyo Agaasimahiiisa Guud kuwaasi oo khilaaf kala irdheeyay muddooyinka dambe kaasi oo saamayn ku yeeshay hawlihii iyo shaqadii ay qaranka u hayeen oo naafowday